भालुवाङ नै हुने भयो प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी, कति पर्यो पक्ष र विपक्षमा मत ? — Imandarmedia.com
काठमाडाैं । प्रदेश नम्बर ५ को स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ नै रहने भएको छ। मंगलबार प्रदेशसभामा भएको मतदानमा देउखुरी राजधानी राख्ने पक्षमा ६९ मत खसेको हो १३ विपक्षमा भने मत खसेको छ।
दाङको राप्ती गाउँपालिकाको भालुवाङ बजार भौगोलिक दृष्टिकोणले बुटवलदेखि १०० किलोमिटर पश्चिम भागमा पर्छ। यसरी हेर्दा राजधानी १०० किलोमिटर पश्चिममा सरेको छ। प्यूठान, अर्घाखाँची र कपिलवस्तु जिल्ला भने प्रदेशको स्थायी मुकामकै सीमामा पर्छन।
त्यस्तै बाँकेसँग सीमाना जोडिएको अमेलिया बजारबाट ६० किलोमिटर पूर्व र लमही बजारवाट २५ किलोमिटर पूर्वी भागमा भालुवाङ बजार रहेको छ। भालुवाङ बजार नेपाल-भारत सीमा नाका कोइलावास ३४ किलोमिटर दक्षिणमा पर्छ। कोइलावास नाका गढवा गाउँपालका वडा नं. ८ मा पर्छ।
दाङको देउखुरी राजधानी भएपछि कोइलाबास नाकाले पुनर्जीवन पाउने आशा गरिएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर ५ को नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय भएको छ।
प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकले दुईतिहाइ बढी मतले प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेशको नामाकरण गर्न भएको मतदानमा ८७ मध्ये ८३ जनाले भोट हालेका छन्। लुम्बिनी नाम राख्ने पक्षमा ७९ मत खसेको छ भने विपक्षमा जम्मा ४ मत खसेको सभामुख पूर्ण घर्तीले जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्रीले के भने ?